Radik Guschin wuxuu sheegay in uu yahay aabaha dhalay Zhanna Friske. Olga Orlova ayaa faallo ka bixiyay xanta ku saabsan aabbaha aabbaha Zhanna Friske
Vladimir Friske saaxiibkiisa ayaa u caddaynaya aabanimada aabbaha ee Plato
Maalintii kale waxay ahayd lix bilood tan iyo dhimashadii Jeanne Friske. Nasiib darro, waqtigaan oo dhan magaca magaca heesaha ayaa sii wadaya in uu sawiro faahfaahin dheeraad ah. Wakhtiga rasmiga ah ee warbaahinta, wararkii ugu danbeeyay ee ku saabsan khilaafka u dhexeeya aabaha sanadka iyo ninkeeda ayaa soo baxaya.
Habeenkii taleefanka ayaa waxaa jiray warar kale oo naxdin leh oo saaxiibkiis Vladimir Friske uu sheeganayay aabihiis aabihiis Platon. Sida laga soo xigtay xogta la hayo, garyaqaan 32-jir ah, Radik Gushchin ayaa codsi u gudbiyay Maxkamadda Degmada Khamovnichesky, halkaas oo uu ku andacoonayo inuu yahay aabaha kaliya ee Zhanna Friske.
Guschin wuxuu ku andacoodey in xagaagii 2012 uu xiriir la lahaa heesaha. Sida laga soo xigtay qareenka dhallinyarada ah, Jeanne waxay u sheegtey uurkeeda, 9 bilood ka dibna waxay ku dhalatay Plato mid ka mid ah xarumaha Maraykanka. Waqtigaas oo shahaadada dhalashada la soo saaray, Dmitry Shepelev ayaa halkaas lagu daray. Goushchin waa hubaal in saraakiisha Maraykanku ay sidan ku sameeyeen, oo ku saleysan hadalkooda TV-ga.
Codsadaha 32 jirka ah ee aabbanimada ayaa shaqaalaysiiyay qareen kaasoo wakiil ka noqonaya danihiisa. Sida laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, Guschin hadda waa isqabey, sidaas darteed ma doonayo in sheekada oo dhan la wadaagto aabaheed si wada hadal guud. Intaanay tagin maxkamad, ninkii wuxuu sheekada oo dhan u sheegay sheekada aabbihii.
Olga Orlova ayaa faahfaahin ka bixisay warkii ugu dambeeyey ee ku saabsan aabbaha aabbaha Zhanna Friske
Weriyeyaasha shirkadda Ren.tv ayaa codsaday faallooyin ku saabsan codsiyada cusub ee aabonimada ee saaxiibka ugu dhow ee Zhanna Friske iyo Plato's godfather. Olga Orlova ayaa sheegtay in aysan waligeed maqlin Radik Guscin:
Ma hayo wax macluumaad ah, ma aqaano cidda ay tahay.
Orodyahanka Orlova wuxuu ku daray in Plato uu aad ula mid yahay Dmitry Shepelev.
Sobchak, Navalny, Rudkovskaya iyo dabaaldegyo kale ayaa dabaaldegay dhalashadii "Rain", sawir
Julia Samoylova ayaa ka hadli doona Ruushka tartanka Eurovision-2017: Dareenka shabakada ee ku saabsan doorashooyinka fanaanaha naafada ah
Waxaa loo yaqaan 'Sergei Lazarev' oo fasax jaceyl ah ku jooga Italy, sawir
Natasha Koroleva ayaa ka sheekeysay diiqadeeda
Victoria Bony ayaa la jejebiyay Alex Smerfit - taageerayaasha ayaa ku dhawaaqaya digniinta
Kirkorov ayaa mar kale ku hareeray casaan ah: fadeexad?
Sergey Bezrukov ayaa weydiistay isticmaalka shabakadaha bulshada ee ku saabsan adeegga
Muxuu yahay timo aad u leedahay inaad horay u socoto
Aan la aqoonsan
Waxaan miisaankeena ku soo celineynaa caadi ahaan bisha dhexdeeda
George Zhzhenov: biography
Cuntadani suugo macaan
Cadaadiska sii kordhaya ee uurka
Calaamadaha xasaasiyadda iyo qaababka casriga ah ee daaweynta
Cheesecakes oo la qalajiyey miraha
Sida loo doorto xayawaan caruur ah
Uurka, sheekooyinka ku saabsan dhalmada
Caafimaadka, dhalinyarada iyo quruxda
Dysplasia oo ku dhaca dhuunta wadnaha
Sida loo jiifiyo ilmo hurdaysan oo hurda
Sida loo doorto jijin ah lugta
Cunto karis laga soo qaado hooyada Finnishka ah
Cannaanka lenten on casiir yaanyo